Tantara mitohy « Tsisy mipika » : Mitana toeran’ny vehivavy sahy sy henjana amin’ny tokantranony i Dah’Mama -
AccueilVaovao SamihafaTantara mitohy « Tsisy mipika » : Mitana toeran’ny vehivavy sahy sy henjana amin’ny tokantranony i Dah’Mama
Tantara mitohy « Tsisy mipika » : Mitana toeran’ny vehivavy sahy sy henjana amin’ny tokantranony i Dah’Mama
19/10/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Be mpanaraka ireo tantara mitohy amin’ny fahitalavitra, ary tsy diso anjara amin’izany ny vokatra malagasy. Efa ho iray volana izao no ambohi-pihaonan’ny mpianakavy ny fanarahana ilay tantara mitohy « Tsisy mipika ». Anisan’ireo mpilalao mitana ny toeran’ny vehivavy sahy sy henjana amin’ny fitantanana ny tokantranony ao anatin’ny tantaran’ i Dah’Mama. « Raharaha be ny nampifandrifiana ny fotoana hanaovana ny fanodinana sy ny fotoana hiakarany an-
tsehatra. Efa voadinika ireny fa tsy maintsy nirosoana satria nilana olona tena mahafehy ny anjara
toerana misy azy » araka ny fanamarihan’ny tompon’andraikitra ao amin’ny SCOOP digital, mpamokatra io horonantsary mitohy io.
Mpilalao fototra mitana ny anjara toeran’i Zénaïde i Dah’Mama izay miavaka amin’ny feo avo sy mikarantsana, fijery hentitra feno fampitandremana. Toetra izay tsy dia misy ifandraisany loatra amin’ny fahitana azy rehefa eny an-tsehatra. « Hainy ny mampihaina ny tantara. Anisan’ny toerana tena sarotra tokoa no misy an’i Dah Mama, satria ao aminy no ahitana ny iray amin’ireo fatorana lehibe, na ny « nœud dramatique » ihodinan’ny tantara», hoy ihany ny mpamokatra. Renim-pianakaviana miaro ny tombontsoan’ny tokantranony izy eto, ka sady miatrika ny dona any ivelany nomandamina ny savorovoro anatiny, toy ny zanaka maditra sy ny tsy fifanarahan’ny zanaka sy nyvinanto .
Hivoaka ny alakamisy 26 oktobra izao, manerana ny nosy, ny DVD « TSISY MIPIKA saison I » izay ahitana ny fiaingan’ny tantara rehetra.